Home Wararka Xundubey oo ka horyimid xilka qaadistiisa & Wasiirka cusub oo xoog ku...
Xundubey oo ka horyimid xilka qaadistiisa & Wasiirka cusub oo xoog ku qabsanayo Wasaarada
Wasiirka amniga Xukkumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo shalay xil ka qaadis ku same RW Rooble ayaa ka hadlay Xilka Qaadistii uu ku sameeyay Rooble.
Xasan Xundubeey ayaa ka ka horyimid xilkaqaadistaam. Isaga oo warbaahinta la hadlay sidoo kalena qoraallo kala duwan soo saaray ayuu ku sheegay in Xilka qaadistii lagu sameeyay ay ahayd mid sharci darro ah, waxaana uu ku tilmaamay in ay tahay mid uu doonayo RW Rooble in dalka uu qalalaaase hor leh galiyo.
“Aniga iyo RW Rooble waxaan isku ogayn, oo aan isku dhaarsannay in dalka dhibaatada laga saaro, waxaana ka mid ahaa Wasiirada sida gaarka ah ula saqeeyay Ra’iisul Wasaare Rooble, lama joogo xilli la is qabqabsado oo xil la iska qaado, waxaa dalku uu galayaa doorasho, waana in laga wada shaqeeyaa arrimahaas” ayuu yiri Wasiirkii Xilka laga qaaday Xasan Xundubeey Jimcaale.
Dhanka kale Wasiirka cusub Cabdiullahi Maxamed Nuur ayaa ku goodiyay in uu saakay geeysan doono xarunta wasaaradda ciidan, xoogna uu halkaas ku qabsan doono. Wasiirka uu magacaabay Rooble ayaa ka soo jeeda beesha uu ka dhashay Wasiir Xundubeey.
Wasiirkii hore ee amniga Xukuumadda Federaalka ayaa intaasi ku daray in ay been abuur tahay wararka sheegaya in isagu dalbaday in xilka laga qaado, waxaana uu sheegay in aysan sharci ahayn xilka qaadistiisu.